xisaabyahan ah ayaa loo xisaabiyaa qiimaha Seeraar waayo, 2018 - Blockchain News
xisaabyahan ah ayaa loo xisaabiyaa qiimaha Seeraar waayo, 2018
Price of Seeraar waayo, 2018
on January 22, user Dhexdhexaad Joel Lopez Barata daabacay a post: “Waxaan xisaabiyaa qiimaha Seeraar sanadka oo dhan 2018. Waxaad ma rumaysan doontaan natiijada! “Iyada oo Afeef ah” taasi waa uun ra'yi, ma golaha maalgelinta. ” Lopez ayaa xisaabta ku salaysan yihiin la xiqiijiyay in dhaqanka Seeraar mustaqbalka u dhigma doonaa in uu dhaqanka ee la soo dhaafay. Kiiskan, Lopez aragto Seeraar “lacag caafimaad”, iyo Fiat – no: “faa'iido mustaqbalka noqon doonaa siman u dambeeyey, halka dadka intooda badan in ay fahmaan in Seeraar waa lacag ugu fiican.”
jilitaanka Lopez wuxuu ku salaysan yahay ka Habka Monte Carlo. Tani waa tiro balaadhan oo ah algorithms xisaabeed ku tiirsan baarka random soo noqnoqda. Kiiskan, Lopez isticmaalaa dollar faa'iido maalin walba ka Seeraar si ay u fahmaan waxa qiimaha qiyaas ahaan doonaa dhamaadka 2018.
Si loo xisaabiyo faa'iido ah maalin kasta, wuxuu qaybin doonaa qiimaha Seeraar hadda by qiimaha for maalin ee la soo dhaafay iyo kalagoynaya unugga: “Isagoo ka hadlayay ku saabsan matalaada Monte Carlo ee maaliyadda, waxaan u qaadan in dhaqanka sicirka mustaqbalka ee hantida waxay noqon doontaa mid ah in ay dhaqanka ee la soo dhaafay, iyo in la abuuro badan oo versions random mustaqbalka this , oo loo yaqaan xisaabta “qaybaha random”. code The buuxda abuuraya jilidda noocan oo kale ah waxaa laga heli karaa GitHub.
In la dhiso model kasta socod random jilitaanka, waa mid aanu qaadno walax-random of faa'iido maalin kasta ka 2010 maanta, iyaga ku dar, ka dibna isu geeyn ah u badin ilaa December 31, 2018. Ka dib markii in, qiimaha hadda Seeraar tarmaan by qiimaha socod random, iyo natiijada waa mataalada ah qiimaha mustaqbalka. Tani waxay u baahan tahay in la sameeyo marar badan (kiiskan – 100,000 jeer), iyo dhamaadka sanadka inaan arki doono qiimaha qaybinta final socod kasta random.
Midkii kowaad wuxuu u 200 of 100,000 qaybaha random sidan u eg:
Waxaa soo baxday in qiimaha kama dambaysta ah ugu random socdaa safafka ka $ 10,000 si ay u $ 100,000. jaantuska soo socda waxay muujinaysaa qaybinta qiimaha kama dambays ah oo dhan 100,000 qaybaha random:
Waxa ay muujinaysaa in qiimaha badan tahay kala duwan $ 24,000 iyo $ 90,000. Si aad u dheeraad ah si hufan u fahmaan, waxaa jira siyaabo dhowr ah. First, aad si fudud u xisaabin kartaa 50% -Boqolleyda th of qaybinta qiimaha final. Waxa ay noqon doontaa si siman u $ 58,843. Hab kale waa in la xisaabiyo function cufnaanta jaaniska isticmaalaya qiyaasta cufnaanta nuclear oo ay helaan qiimo u dhigma ugu badnaan ee shaqada this – $ 55,530.
Laakiin tani ma aha tilmaanta final, weli waa ka fiican si aad u isticmaasho si aad u hesho bareeg kalsoonida. Qiimo Seeraar ah, ah 80% kalsooni bareeg noqon doonaa $ 13,200 – $ 271,277. Waxa uu sidoo kale tilmaamay, in fursadaha in dhamaadka sanadka qiimaha hoos ku noqon doontaa $ 13,200 waxay la mid yihiin fursadaha in ay noqon doonto kor ku xusan $ 271,277.
Hadda qiyaasta cufnaanta nuclear waxaa loo yaqaan, waxaa suurtagal ah in loo xisaabiyo itimaalka in kharashka Seeraar dhici doonaa dhamaadka qaraabo sanadka si tilmaame gaar ah. Khaas ahaan, jaaniska in qiimaha uu noqon doono hoose ama la mid ah heerka January 20 ($ 12,000), waa 9.84%.
Post Previous:weerar hubeysan ayaa waxaa ka go'an on Crypto Canadian ah Exchange
Post Next:Blockchain News 26 January 2018